[Video] Otu esi eme nkwado ndabere nandroid nke gam akporo anyị site na nzọụkwụ | Gam akporosis
[Video] Otu esi eme nkwado ndabere nandroid nke gam akporo anyị site na nzọụkwụ
Ndị na-esonụ bara uru nkuzi, n'ihi na otutu arịrịọ natara site na-elekọta mmadụ na netwọk nke Gam akporosis, M kpebiri na m ga-egosi gị graphically site a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkọwa video, ụzọ ziri ezi iji mee ndabere nadroid nke sistemụ arụmọrụ gam akporo anyị niile.
Na nandroid nkwado a, nke bụ ihe ọ bụla karịa a zuru ndabere nke anyị dum gam akporo sistemụ, Anyị ga-enwe ike iji naghachi dum gam akporo usoro na steeti dị ka ọ bụ ụbọchị anyị na-eme ka hotara na mbụ ndabere. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịga nke ọma mgbe ikpuchi ọ bụla nke zip ọ bụla ma ọ bụ ọnụ ọnụ ahụ kwụgidere ma ọ bụ ntinye ya emeela ka usoro na-adịghị mma.
Ndabere a nke sistemụ arụmọrụ gam akporo anyị niile, nyocha emere, Ọ bụ ihe amamihe ịchekwa ya na ebe na-abụghị gam akporo anyị, n'agbanyeghị ma akwụkwọ mbụ ahụ ka dị na ngwaọrụ anyị, yabụ anyị zere ịlafu ya, ọkachasị ndị ọrụ maara nke ọma na-acha ọkụ ọkụ ROM, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịhazi nchekwa nchekwa ma ọ bụ sdcard ma tufuo nchekwa nchekwa bara uru nke gam akporo anyị. sistemụ nrụọrụ. Ndabere nke nwere ike ịchekwa ndụ nke ngwaọrụ anyị.
Dika inwere ike ihu na vidiyo ntughari n'isi nke post a, usoro a di mfe ma nye anyi ohere iji otu okwute ju nnunu abuo ebe obu na otu usoro anyị ga-enwe ike ịme akwụkwọ ndabere nke folda EFS, folda dị mkpa maka iji gam akporo anyị eme ihe n'ụzọ ziri ezi, yana na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ na-efukarị n'ụzọ na-egbu maramara ụfọdụ ROM. Ọ dabara nke ọma na ikpe ndị a dị obere ma pere mpe, mana dịka m na-adụ ọdụ mgbe niile, ọ ka mma ịme nkwado ndabere naanị ma ọ bụrụ! na izere ezigbo nsogbu nke mgbake nke gam akporo anyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » [Video] Otu esi eme nkwado ndabere nandroid nke gam akporo anyị site na nzọụkwụ
Zaghachi nye Christian moreno
eu mefu nụ mu. Kpọmkwem download ma ọ bụ download nke outro iji weghachi usoro. Kedụ ka ị ga - esi mee esse maka nbudata?
Zaghachi Pabllo Rodrigues de Araujo
Dị ezigbo mkpa ịmara
na-akpali mmasị !!! na ajuju m bu esi azoputa ya na ngwa ozo dika pendrive. Ndabere m nwere 12Gb. Daalụ
Enwere m ajụjụ… Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ maka mgbake nke m tinyegoro (mmetụ aka nke philz clockworkmod), mana enwebeghị m nandroid bachup mgbe m na-eweghachi ha… gbanye mgbọrọgwụ na ngwaọrụ m na ọtụtụ ndị ọzọ site na Samsung brand na site na ụdị dị iche iche, arụnyere roms dị iche iche ọtụtụ oge wdg ... mana ebe ọ bụ na ha ekwenyeghị, m laghachiri na rom ahụ m nwere na mbụ (nke bụ ngwaahịa samsung, ma maka s2 i9100 nke m nwere afọ ole na ole gara aga, na s4 i9500 m nwere ugbu a) na n'ọnọdụ abụọ ahụ, m ga-eme ya na odin ma degharịa ekwentị n'ihi na mgbe m nyere ya iji weghachite nkwado ndabere na mgbake nke m kwuru, enwere m mgbe niile njehie, na ụdị abụọ ahụ ... Ma ọ bụ na ọ bụ na ha enweghị ike weghachite backups nke samsung stock firmware? Mgbe ụfọdụ m na-eche na mgbake.
You nyochaala na ị nwere ohere zuru oke iji rụọ nandroid backup?
Ndewo, emere m mgbake na ihe niile ị kwuru, ihe niile zuru oke ruo mgbe m gwụchara, ọ gwara m ka m bidogharịa, m pịa ka m bidogharịa, ihuenyo ahụ ajụla oyi mgbe m malitere, ọ na-ekwu naanị Lenovo kwadoro site na android, Biko nyere aka, kedu ihe ị ga-eme M na-eme ebe ahụ?
Ndewo ọma, otu ihe ahụ na-eme m, m gbanyụrụ ọnụ ya mgbe m nọ na mgbake mode n'ụzọ ọjọọ n'ihi na amaghị m otu esi gbanyụọ ya ebe ahụ na-ewepu batrị ma ugbu a, mgbe m gbanwere ya na nkịtị ọ na-eme agaghị agafe m n'ụlọ ihuenyo ebe ọ na-ekwu lenovo kwadoro site na android, biko nyere m aka enweghị m mobile na ọ na-enyo m naanị site na mgbake
Zaghachi na manuelferal
Ana m eme nkwado ndabere tupu ịwụnye ROM, iji jide n'aka na m nwere ike iweghachite ekwentị ma ọ bụrụ na enwere m nsogbu na nwụnye. Enwekwara m TWRP, mana enwere m ihe niile n'asụsụ Spanish kama ị ga-asụ bekee dị ka vidiyo. Mgbe m banyere nhọrọ ndabere, EFS apụtaghị na ọ nwere ike ịhọrọ ya, naanị m na-ahụ ihe ndị a iji kaa akara:
Ma cursor ahụ apụtaghị n'akụkụ aka nri iji nwee ike ịrịgo na ala na ihuenyo ahụ, mana m ghọtara na ọ ga-abụ n'ihi na ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-akụzi na menu ahụ a hụbeghị.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị.
ENWEGHỊ M ELO Ọ BỤLA dijo
Nwere ike onye na-ekwu okwu na "Christian" na anyị na-aghọta onye ọ bụla ọzọ na-enweghị ọtụtụ riscovery ma ọ bụ flaapu.
na Castilian na obere mgbagwoju anya. onye na amaghi, adighi ahu. Daalụ
Zaghachi na NOTENGOIDEA
Ndewo kedu ka ihe si dị?
Ozugbo emere nkwado ndabere ahụ, ebee ka echekwara ya na ọnụ ya? Enwere m mmasị na ịnyefe ya na kọmputa m ebe ọ bụ na enweghị m ohere dị ukwuu n'ime ọnụ ya.
Egwuregwu dị elu nke 10 belatara karịa 50% maka Black Friday na gam akporo